I-Bintangor Plywood, iPlywood yoRhwebo, iPlywood yokwakha ikhonkrithi-Edlon
I-Edlon Wood Products Co, Ltd yasekwa ngo-2003, embindini we-HuaiHai zone yezoqoqosho, ityebile ngezinto zeenkuni kunye nabasebenzi abanobuchule. Sisoloko sijonga kwizisombululo zeenkuni zokwakha ezifayilwayo kunye nefanitshala eyenziwe ngefilim, Iimveliso zethu eziphambili ziqulethe INDAWO YOKUGQIBELA, INDAWO EFANELEKILEYO, INDAWO YOKUGQIBELA INDAWO YOKUGQIBELA kunye ne-HPL PLYWOOD, iintlobo ezininzi zebhodi yamanyala kubandakanya iPETG, ACYLIC, PVC, MELAMINE …………… Ukusetyenziswa okuzinzileyo kwezixhobo zeenkuni ngokusebenzisa umgangatho kuqala, sihlala sakha igama elihle nelicocekileyo i-EDLONWOOD, eqinisekisa imigaqo-siseko ethembekileyo kunye neyoqoqosho oluphezulu kubo bonke abathengi bethu abaxabisekileyo.
Iphaneli yeLaminate yinkqubo yesibini kwisiseko se-plywood, egubungela umphezulu wayo ngomaleko wezinye izixhobo ukuhlangabezana neenjongo ezahlukeneyo zokusebenzisa. Okwangoku, sinokubonelela ngezinto ezinjenge-HPL, i-PVC, i-PETG, i-acrylic, iMelamine, i-UV, njl. Njl. Inokusetyenziswa kwifenitshala ephezulu, ikhabhathi, igumbi lokuhlambela, njl njl.
Door plywood ibhekisa kwi-plywood yesayizi ekhethekileyo esetyenziselwa ukwenza iiphaneli emnyango. Sinokubonelela ngeemveliso zemibala eyahlukeneyo, izitayile kunye neepateni ngokweemfuno zabathengi. Ngokukwanjalo, sikhulisa zonke iintlobo zeemveliso ezintsha, kwaye ukubonelela abathengi ngeemveliso eziphambili zezona njongo zethu.
Ibhodi yefanitshala yeyona plywood ixhaphakileyo, esetyenziselwa ukwenza ifanitshala, njengewadi, ikhabhathi yencwadi, njalo-njalo. Inamandla kunye nokugquma, kwaye kukho nemveliso ekhethekileyo, i-LVL, izinto ezisetyenziselwa ukwenza ibhedi.